Sarkaal horay oga tirsanaan jiray Ciidamada GSU-da oo lala xiriirinayo argagixiso oo xabsiga loo taxaabay – The Voice of Northeastern Kenya
Sarkaal horay oga tirsanaan jiray Ciidamada GSU-da oo lala xiriirinayo argagixiso oo xabsiga loo taxaabay
Mid kamid ah sarkaal horay oga tirsanaan jiray ciidamada sida Militariga u tababaran ee loo yaqaano GSU-da ayaa shalay xabsiga loo taxaabay kadib marki gor sii horeysay lala xiriiriyay kooxaha loogu yeero argagixisada.
Eddeysanahan oo magaciisa lagu sheegay Alfan Rashid ayaa laga qabtay gurigiisa meel u dhow Kombani oo katirsan Countiga Mombasa ee gobolka xeebta ee dalka.
Laamaha ammaanka ayaa soo saaray sawiro 30-kii bishii May oo uu ku jiray sarkaalkan oo lagu eedeeyay in ay qalqal galinayaan amaanka gobolkaasi oo ay horay ooga dhaceen weeraro ay dad badan ku dhinteen.
Dadkii kale ee sawiradooda xiligaas la shaaciyay islamarkaana si aad loogu daba jiray ayaa waxaa kamid ahaa Ali Haji, Ali Salim, Said Athman, Said Hassan, Ali Hamisi, Ali Musa iyo Hamisi Musa.
Alfan Rashid ayay Booliska sheegen in uu ka dambeeyay dilkii loo gestay odeyaasha Countiga Kwale oo ka qeyb ahaa barnaamijka loogu magacdaray Nyumba Kumi oo lagu xaqiijiyo dhaqdhaqa dadka deriska isla ah.
Howlgal baaxad leh oo ay ciidamada wadeen maalimihii dambe ayaa lagu soo qabtay ninkaasi iyadoo la sheegay in gurigiisa laga helay bam gacmeed iyo aalado kale oo qarxo.
Warbixin laga helayo Booliska ayaa sheegay in Mr Alfan uu shaqada ciidan ka faristay kadib markii uu ciidanka GSU-da kusoo jiray muddo 12 sanadood ah, waxaana hadda la rumeysnaa in Kooxda Alshabaab ay u tababareen sidii dhalinyarada aagasi uu ugu biirin lahaa fikradaha xagjirnimo.
OCPD-ga Kwale Patrick Oduma oo xaqiijiyay qabashada sarkalkaasi ayaa sheegay in goor dhow uu kasoo hormuuqan doono Maxkamada si dacwada loogu soo oogo ka hor inta aan su’alo la weydiinin.
Mas’uulkan ayaa intaa ku daray in Mr Alfan waajibadkiisa uu sidoo kale ahaa in uu qaarijiyo ciidamada amaanka iyo dadka ka hortago falalka amni daro waxana ugu baaqay dadweynaha in wixi sidan oo kale ay ooga shakiyaan ay booliska ku soo wargaliyaan.
Duqey magacyadooda lagu kala sheegay Mohammed Juma, Juma Omar, Hassan Debe iyo Subira Sudi ayaa dhamaantood dabley aan hebtooda la aqoon ku dilay gobolka xeebta waxayna wada ahaayen odeyaasha barnaamijka Nyumba Kumi.
Laamaha amaanka ayaa goor hore soo saaray sawiro muujinayo dad lagu eedeeyay in ay katirsan yihiin kooxda Alshabaab ee fadhigeedu yahay dalka Soomaliya oo mar badan weeraro ay dad ku dhinteen ka gestay gudaha dalkani Kenya.
← Shan Scool oo uu dab ka kacay xalay oo talaada ahayd
Ciidamada Konfurta Sudan oo eedeyn dusha looga tuuray →